विदेश जाँदा–आउँदा लैजान र ल्याउन पाउने वस्तुको नयाँ सूची सार्वजनिक, के के कति ल्याउन पाईन्छ ?
काठमाडौं । २०७३ जेठ २३ गतेको झिटीगुण्टा आदेश विस्थापित गरी सरकारले विदेश जाँदा–आउँदा लैजान र ल्याउन पाउने बस्तुको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले खासगरी सुन र चुरोटतर्फ सूची परिवर्तन गरेको हो । तर, यात्रुले भने बेलैमा जानकारी नहुँदा भन्सार जाँच–पासमा समस्या पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
विदेशबाट फर्कने नेपालीले अब काँचो सुन एकसय ग्रामसम्म भन्सार तिरेर ल्याउन पाउने छन् । काँचो सुनमा ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ६ हजार २ सय र सोभन्दा माथि प्रति १० ग्रामको ७ हजार ३ सय रुपैयाँ राजश्व तिर्नु पर्ने छ । १ सयग्रामभन्दा माथि काँचो सुन ल्याए जफत हुने छ । ५० ग्रामसम्मको गहना निःशुल्क ल्याउन पाइने छ भने सोभन्दा माथि १ सय ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय र १ सय ५० ग्रामदेखि माथी प्रति १० ग्राम ९ हजार ३ सय रुपैयाँ भन्सार तिर्नु पर्ने छ ।
अरु के के ल्याउन पाईन्छ ?
– चुरोट, एक लिटरसम्म मदिरा, सात किलोसम्म खाद्य परिकार, २ हजार रुपैयाँसम्मको फलफूल र ५ हजार रुपैयाँसम्मको खानेकुरा ।
– मोबाइल, ल्यापटप, ३२ इन्चसम्मको टीभी, ट्याबलेट, घडी, क्यामरा, पोनड्राइभ एक–एक थान ।
– औषधि उपचार गराई बिरामीले ल्याएको औषधि, शारीरिकरुपमा अशक्त यात्रुले सहाराका लागि प्रयोग गरेका समाग्री ।
– ५ सय ग्रामसम्मको चाँदीको गहना, एक लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहिरात जडित सुन वा चाँदीका साथमा ल्याएको गहना ।
विदेश जाँदा नेपालमा उत्पादन भएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको २१ केजी सामान लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट फर्किनेलाई नयाँ व्यवस्थाको जानकारी नहुँदा जाँचपासमा समस्या भएको छ । यात्रुले भन्सार जाँच–पासमा विचौलियाको विगविगी बढेको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाले सीमानाका भएर आवत–जावत गर्ने व्यक्तिलाई कुनै छुट वा साहुलियत दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार ऐन २०६४ को प्रावधानअनुसार गरेको परिवर्तन हाल लागू भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका केही प्रावधान भने जेठ १५ जेठबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नेपालमा धेरै युवायुवतीहरु विदेशमा भएको हुनाले आउने जाने क्रम बढी छ । सबैलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा यो कुरालाई शेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुहोला ।